ညီမချောချောလေး ရဲ့ မွေးနေ့ ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြည့်နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေး ခဲ့တဲ့ ဘီလီလမင်းအေး – Shwe Likes
ပရိသတ် ကြီးရေ ဘီလီလမင်းေ အး ကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါြ ပိုင်ပွဲကြီး မှာ ပါဝင်ယှ ဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသ တ်တွေရဲ့ အားပေးချ စ်ခင်မှုကို အပြည့် အဝရရှိ ထားတဲ့ ပရိသတ်တွေ အချစ်ေ တာ် တစ်ယော က်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း အဆိုတော်တစ်ေ ယာက်အနေနဲ့ အနုပညာေ လာကမှာ ရပ်တည်နေ ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဘီလီလမ င်းအေးက သူ့ရဲ့ညီမေ ချာလေးရဲ့ မွေးေ န့ရက်မြတ် ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်ေ လးဖြစ်ပြီး ညီမလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အပြည့်နဲ့ အခု လိုပဲ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းေ တာင်းပေးထားခဲ့ ပါသေး တယ်။
“Dear sister Happy Blessed Birthday. It’satrue blessing to have suchacute, smart, beautiful and caring sister like you. Haveajoyful and unforgettable day, full of everything that you love most….အရမ်းချစ်တယ်နော်။” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတော င်းထားခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘီလီလမ င်းအေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကလ ည်း သူတို့ချစ်ရတဲ့ ဘီလီရဲ့ ညီမလေးမွေးေ န့မှာပျော်ရွှင်စေဖို့ ဝိုင်းဝန်းမွေးနေ့ ဆုတော င်းပေးနေခဲ့ကြပါေ သးတယ်။
ပရိသတ်ြ ကီးတွေထဲက ဘီလီလမ င်းအေးရဲ့ ပရိသတ်ေ တွလည်း ဘီလီရဲ့ ညီမေ ချာလေး မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ေ ကာင်းတော င်းပေးခြဲ့ ကပါဦးနာ်။ Source – Billy La Min Aye
ပရိသတ္ ႀကီးေရ ဘီလီလမင္းေ အး ကေတာ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါျ ပိုင္ပြဲႀကီး မွာ ပါဝင္ယွ ဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ပရိသ တ္ေတြရဲ့ အားေပးခ် စ္ခင္မႈကို အျပည့္ အဝရရွိ ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြ အခ်စ္ေ တာ္ တစ္ေယာ က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာလည္း အဆိုေတာ္တစ္ေ ယာက္အေနနဲ႔ အႏုပညာေ လာကမွာ ရပ္တည္ေန ပါေသးတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ဘီလီလမ င္းေအးက သူ႔ရဲ့ညီေမ ခ်ာေလးရဲ့ ေမြးေ န႔ရက္ျမတ္ က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ေ လးျဖစ္ၿပီး ညီမေလးရဲ့ ေမြးေန႔အတြက္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အျပည့္နဲ႔ အခု လိုပဲ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေ တာင္းေပးထားခဲ့ ပါေသး တယ္။
“Dear sister Happy Blessed Birthday. It’satrue blessing to have suchacute, smart, beautiful and caring sister like you. Haveajoyful and unforgettable day, full of everything that you love most….အရမ္းခ်စ္တယ္ေနာ္။” ဆိုၿပီး ေမြးေန႔ဆုေတာ င္းထားခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဘီလီလမ င္းေအးရဲ့ ပရိသတ္ေတြကလ ည္း သူတို႔ခ်စ္ရတဲ့ ဘီလီရဲ့ ညီမေလးေမြးေ န႔မွာေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေမြးေန႔ ဆုေတာ င္းေပးေနခဲ့ၾကပါေ သးတယ္။
ပရိသတ္ျ ကီးေတြထဲက ဘီလီလမ င္းေအးရဲ့ ပရိသတ္ေ တြလည္း ဘီလီရဲ့ ညီေမ ခ်ာေလး ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေ ကာင္းေတာ င္းေပးျခဲ့ ကပါဦးနာ္။ Source – Billy La Min Aye
ယနေ့ချိန်ထိမရိုးနိုင်အောင် နုပျိုလှပနေဆဲ အလှတရားေ တွကိုပို င်ဆိုင်ထားတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မိုးဟေကို
တောထဲတောင်ထဲမှာ မုန်တိုင်းကြောင့် အိပ်စရာနေရာ မရှိဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကာ တင်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သက်လင်း
ခုတလောလူအသုံးများနေတဲ့ နမိတ်မကောင်း တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ပြီး မဆော့ကြဖို့ တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပွင့်